Araka izany dia mandray ireo fitarainana maro maimaimpoana tonga eny amin’ny sampan-draharaha isanisany izy araka ny nambaran’i Ramatoa Monique Andreas Esoavelomandroso, Médiateur de la République, izay manana ny birao fiasany etsy Isoraka. Maro ireo fitarainana tonga tahaka fijaliana amin’ny fandraisana ny fisotron-dronono. Ankoatr’izay dia maro loatra ny taratasy tadiavina amin’izany ka mampivezivezy sy mahaketraka ireo mahazohazo taona ireo. Tsy vitsy ihany koa ny fitarainana ny amin’ny fanoratana ny tany sy ny resaka fangalana titra. Fa na dia eo aza izany rehetra izany dia hita fa tena vitsy ny Malagasy mahafantatra ny fisian’ity andrim-panjakana ity ka tokony hisy ezaka fanehoana ampahibemaso ny andraikitra iantsorohany. Ny fanontaniana mipetraka koa dia ny hoe tena afaka mamaha olana ve ity rantsana ity sa voafetra tahaka ny BIANCO sy ny SAMIFIN ihany ny andraikiny ka tsy maharototra ny Malagasy?